DEGDEG: Dad loo qabtay Falkii lagu dilay Sowdo iyo Sakariye (Rasaas Caawa ka dhacday Muqdisho) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. DEGDEG: Dad loo qabtay Falkii lagu dilay Sowdo iyo Sakariye (Rasaas Caawa ka dhacday Muqdisho) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa habeenkii labaad rasaas ku furay dad shacab ah, iyagoo dhaawacay qof la socday Mooto Bajaaj.
Shilkan ayaa ka dhacay agagaarka Isgoyska Soobe, suuqa Hayat, waxaana rasaas ay fureen ciidamada dowladda ee gaariga ku dhaawacmay nin lagu magacaabo Mahad C/raxmaan oo xaaladiisu culus tahay.
Gaariga ciidamada dowladda ee rassaasta furay ayaa goobta ka baxsaday, waxaana dhaawaca Mahad C/raxmaan Maxamuud la geeyay isbitaalka digfeer oo lagula tacaalayo.
Xalay ayey ahayd markii ay askar ka tirsan ciidamada dowladda rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa Isgoyska Dabka, iyagoo dilay laba qof oo walaalo ahaa, laguna kala magacaabi jiray Sowdo Maxamuud Xuseen iyo Sakariye Maxamuud Xuseen.
Dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow shaacisay in gacanta lagu soo dhigay askartii ka danbeysay rasaastii xalay ka dhacday isgoyska Dabka iyo tii caawa oo dhimashada iyo dhaawaca sababtay.
Wasiirada cadaaladda ayaa qoraal uu soo saray ku yiri: “Waxaan Shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa in ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen dadkii lagu tuhunsanaa iney geeysteen dilkii walaalaheena Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowdo Maxamuud Xuseen.Sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigey qofkii dhibka u geystey walaalkeena Mahad Abdulrahman Mohamud”
Afhayeenka ciidamada Booliska ayaa goor dhow la filayaa inuu faahfaahin ka bixiyo labada dhacdo iyo dadka loo qabtay.
Previous articleBooliska oo ka hadlay Cidda lagu tuhmay Kiiska Walaallaha Zakariye & Sowdo ee lagu dilay Muqdisho
Next articleNin Dhalinyaro ah oo u geeriyooday Rasaas ay ku fureen Ciidamada Dowladda iyo Askartii ka danbeysay..